दलान नेपाल : जारी मधेश आन्दोलनमा कति भयो क्षती ? - मधेशी मोर्चाको सचिवालयले संकलन गरीरहेको तथ्यांकको प्रारम्भिक आकडा नै भयानक ।
जारी मधेश आन्दोलनमा कति भयो क्षती ? - मधेशी मोर्चाको सचिवालयले संकलन गरीरहेको तथ्यांकको प्रारम्भिक आकडा नै भयानक ।
अहिले सम्म आन्दोलकारी तर्फ कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यू । १० प्रहरी अधिकारीको मृत्यू ।
प्रहरीको गोली वाट गम्भिर धाईते १७ जनाको काठमाडौमा उपचार हुदै ।
प्रहरीको गोली वाट धाईते १७२ जनाको जिल्लास्तर मै उपचार जारी ।
मधेशका सवै जिल्लाहरुमा धाईतेहरु संख्या २ हजार भन्दा वढी देखिएको प्रारम्भिक तथ्यांक ।
सुरक्षा निकायको त्रासका कारण कम्तीमा पनि ५ हजार भन्दा वढी भारत तीर पलायन ।
प्रहरीले आन्द्योलन सुरु भए देखि अहिले सम्ममा १ सय भन्दा वढीलाई नियन्त्रणमा लिएर विभिन्न मुद्धामा फसाउदै ।
विरगंजमा बन्दुक सहित तैनाथ सुरक्षकर्मी
नेपालको घरेलू देखि वाह्य सबै मानव अधिकारवादी संघ संस्था देखि निकायहरुले जारी मधेश आन्द्योलनको क्रममा सुरक्षा निकाय वाट व्यापक वल प्रयोग भईरहेको भन्दै त्यसको आलोचना हुदै आइरहेको छ । यता मोर्चाले आन्द्योलनलाई थप सशक्क्त बनाउदै अघि वढीरहेको छ । आन्द्योलन सुरु भए देखि नै सप्तरीको भारदह, कैलालीको टिकापुर, रुपन्देही, नवलपरासी, पर्सा, रौतहट, धुनषा, महोतरीको लगायतको ठाउमा ठुला ठुला घटनाहरु भएको सार्वजनिक भयो । प्रहरीको गोली वाट एकै दिनमा ६ जना सम्मको मृत्यु भया्े, सयौको संख्यामा धाईते भए । आन्द्योलनको नेतृत्व गरीरहेको सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको सचिवालयले पछिल्लो समयमा सरकारी पक्षहरु संग 'साइड टक' हरु हुन थाले पछि त्यसको तथ्यांक संकलनका लागी जिल्ला स्तरवाट धाईते, मृतकहरु सहित क्षतीको विस्तृत विवरण संकलनमा लागी परेको देखिन्छ । विहिवार दिउसो सम्ममा मोर्चाको सचिवालयले संकलन गरेको तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्ने हो भन्ने जारी मधेश आनद्योलनको क्रममा कम्तीमा पनि ३२ आँन्दोलनकारी सहित १० जना प्रहरी अधिकारीहरुको मृत्यु भईसकेको छ । प्रहरीको गोली वाट गम्भिर धाईते भएका १७ जनालाई काठमाडौ ल्याएर हाल विर अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । ती १७ मध्ये ५ जना आज मात्रै डिस्चार्ज भएका छन ।
मधेशमा विभिन्न जिल्लाहरुमा अहिले पनि प्रहरीको गोली वाट उपचारार्थ धाईतको संख्या १७२ रहेको छ । प्रहरीको लाठी चार्ज देखि विभिन्न स्तरको वल प्रयोगवाट समान्य देखि गम्भिर धाईतेहरुको संख्या २ हजार नाघि सकेको छ । मोर्चाको सचिवालय भन्छन, यो संख्या अझै केहि वढन सकिने सम्भावना छ । कतिपय जिल्लाहरुवाट साथीहरुले भोली देखि पर्सी सम्ममा मात्रै विस्तृत ठोस विवरण पठाउने भनेका छन । मोर्चाको सविवालयले सबै जिल्लाहरुमा धाईते देखि अंगभंग र मृत्यू भएकाहरुको विस्तृत विवरणहरु पठाउन निर्देशन गरेका छन ।
अघिल्लो हप्ता मात्रै सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैया दिने र धाईतेहरुलाई निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिमावर्ती सहरहरुमा मधेशीहरु पलायन भएर गएर पछि त्याहा पनि विभिन्न खाले कार्यक्रमहरु हुन थालेका छन ।
त्यसैगरी सविचालयले प्रहरीले आन्द्योलनको क्रममा जाहा जाहा प्रहरी अधिकारीहरु मारिएका छन, त्याहा त्याहा वाट स्थानिय मधेशी नेताहरु सहित युवाहरु ठुलो संख्यामा भारत पलाउन भएको समेत जनाएको छ । सचिवालयले त्यसको विवरण संकलन गर्न लागी परेको मोर्चाले जनाएको छ । खासगरी टिकापुर घटना पश्चात थारु समुदायका युवाहरु, त्यसैगरी रुपन्ेदेही, कपिलवस्तूर नवलपरासी क्षेत्रमा पनि मानिसहरु सुरक्षा त्रासका कारण पलायन भएको मोर्चाको भनाई छ । महोतरीमा एक प्रहरी अधिकारीका हत्या भए पछि त्याहाका स्थानिय स्तरका सबै मधेशी नेताहरु भारतीय सिमावर्ती सहर मधवारपुरमा गएर टेन्ट टागेर बसीरहेको समाचार आएको थियो ।
प्रहरी नियन्त्रणमा तमलोपा नेता जितेन्द्र सोनल
त्यसैगरी प्रमुख तीनले ३ असोजमा नयां घोषण गर्न अघि वढे पछि आन्द्योलनरत मधेशका जिल्लाहरुमा स्थानिय प्रभावशाली मधेशी नेताहरुलाई पनि प्रहरीले धमाधम पक्राउ तोडफोड सहितको सार्वजनिक मुद्धामा थुन्न थालेका थिए । वारामा त प्रहरी अधिकारीले तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल सहितका स्थानिय नेताहरुलाई समातेर भित्र राखेका छन । पर्सावाट २५ जना समातेर तथ त्याहाका केहि स्थानिय प्रभावशाली नेताहरु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए । मोर्चाको सचिवालयका अनुसार पर्सा, वारा, रौतहट मोरड, सहित पश्चिममा थारु नेताहरु सहित १ सय भन्दा वढीलाई प्रहरीले अझै नियन्त्रणमा राखेका छन ।